Iwo eTop 5 Maitiro muDhijitari Asset Management (DAM) Kuitika Muna 2021 | Martech Zone
Kufamba kuenda muna 2021, kune zvimwe zviitiko zviri kuitika mu Digital Asset Management (dhamu) indasitiri.
Mu2020 takaona shanduko huru mumashandiro nemaitiro evatengi nekuda kwecovid-19. Sekureva kwaDeloitte, huwandu hwevanhu vanoshanda kubva kumba vakapetwa kaviri muSwitzerland munguva yedenda. Kune zvakare chikonzero chekutenda kuti dambudziko richakonzera a kuwedzera kusingaperi kwebasa riri kure pasirese pasirese. McKinsey zvakare inotaura nezvevatengi vachisundira mukuwedzera kwemasevhisi edigital kana maitiro ekutenga, kusvika padanho rakakura kwazvo muna 2020 kupfuura nakare, inokanganisa makambani maviri eB2B neB2C.
Nezvikonzero izvi uye nezvimwe, tiri kutanga 2021 pane zvakasiyana zvachose kupfuura zvataizotarisira gore rapfuura. Kunyangwe kunyorwa kwedigital kwave kuri kuitika kunoenderera kwemakore akati wandei ikozvino, pane zvikonzero zvekutarisira kuti kudiwa kwayo kuchazongowanda mugore rinouya. Uye nevanhu vazhinji vanoshanda vari kure - uye zvigadzirwa nemasevhisi ari kutengwa uye kuitiswa online kusvika padanho rinowedzera - isu tinotarisira kuona kukura kunoonekwa muhuwandu hwezvinhu zvemadhijitari uye kudiwa kwekutsigira software. Naizvozvo, iko kusahadzika kushoma kuti Dhijitari Asset Management Software ichave yakakosha basa chikuva chemabhizinesi mazhinji nemasangano mugore rinouya.
Muchinyorwa chino, isu tichatarisa padyo nezvakachengeterwa muna 2021 zveDhijitari Asset Management mapuratifomu uye tinonyora iwo epamusoro mashanu maitiro atinotenda kuti ndiwo achanyanya mukurumbira gore rino.
Maitiro 1: Kufambisa uye Dhijitari Asset Management
Kana 2020 yatidzidzisa chinhu chimwe, kwaive kukosha kwemaitiro ane simba ekushanda. Kugona kushanda kure uye kuburikidza nemhando dzakasiyana dzemidziyo, kwave kubva pakuva mukana kuenda kuchinhu chakakosha kumabhizinesi mazhinji nemasangano.
Kunyange mapuratifomu eDAM anga achibatsira vanhu nemasangano kuti vashande vari kure kwenguva yakareba, zvine musoro kutenda kuti vanopa software vanozofambisa basa rine simba kusvika padanho hombe. Izvi zvinosanganisira kunatsiridza akati wandei DAM mashandiro, senge kushandiswa kwemafoni nhare kuburikidza nemaapps kana kufambisa yekuchengetedza gore kuburikidza neSoftware seSevhisi (SaaS) chibvumirano.
PaFotoWare, isu takatotanga kugadzirira vatengi vanoda kufamba kwakanyanya. Pamusoro pekuwedzera tarisiro yedu paSawaS, isu takaparura zvakare nharembozha app muna Nyamavhuvhu wa2020, tichigonesa zvikwata kuwana uye kushandisa yavo DAM vachienda kuburikidza nenharembozha yavo.
Maitiro 2: Kodzero Kuteedzera uye Mvumo Mafomu
Kubva zvakatemwa nemitemo yeEU GDPR mu2018, pakave nekuwedzera kuri kudiwa kwemabhizinesi nemasangano kuti aratidze zvemukati uye nemvumo. Zvakadaro, mumwe anokwanisa kuwana masangano akati wandei achinetseka kutsvaga nzira dzekuteerera iyi mirau zvinobudirira.
Gore rakapera isu takabatsira vazhinji vashandisi veDAM kumisikidza mafaflows kugadzirisa nyaya inoenderana neGDPR, uye ichi chinofanira kuve chinotarisisa kutarisa muna 2021 zvakare. Nemamwe masangano anoisa pamberi manejimendi wekodzero uye GDPR, isu tinotenda mafomu ekubvumidza kuve nenzvimbo yepamusoro pazvishuwo-zvinyorwa zvevazhinji vanobatana.
30% yevashandisi veDAM vakafunga manejimendi manejimendi manejimendi seimwe yemabhenefiti makuru.
Nekuitwa kwemafomu emvumo yedhijitari, uku kunofanirwa kuve kushanda kwesimba rakakura, kwete chete maererano nekutarisira GDPR, asi yemhando dzinoverengeka dzekodzero dzemifananidzo.
Trend 3: Dhijitari Asset Management Kubatanidzwa
Basa rekutanga reDAM nderekuchengetedza nguva nekuedza. Kubatanidzwa nekudaro kwakakosha pakubudirira kweDAM, sezvo vachigonesa vashandi kutora zviwanikwa zvakananga kubva papuratifomu pavanenge vachishanda mune zvimwe zvirongwa, zvinoitwa nevakawanda.
Makwikwi ekumusoro-soro ari kusimuka kubva kune imwechete-yevatengesi suite mhinduro, ichitungamira yakazvimirira software vanopa panzvimbo.
Iko kune pasina mubvunzo akawanda mabhenefiti ekutora nekusarudza software pane kusungwa kune mumwe kana vaviri vatengesi. Zvisinei, kusangana kwakakodzera kunofanirwa kunge kuripo kuitira kuti makambani awane zvakanakisa pasoftware yavo yakazvimirira. APIs uye plugins saka zvakakosha kudyara kune chero software mupi anoda kugara akakodzera uye acharamba achikosha kuburikidza ne2021.
MuFotoWare, tinoona yedu plugins eAdobe Creative Cloud uye Microsoft Office kuve inonyanya kufarirwa pakati pevashambadzi, pamwe nekubatanidzwa kwesangano PIM system kana CMS. Izvi zvinodaro nekuti vatengesi vazhinji vanofanirwa kushandisa akasiyana nhumbi mune yakawanda zvirongwa zvakasiyana uye software. Nekuve nekubatanidzwa munzvimbo, tinogona kubvisa kudiwa kwekuramba tichirodha pasi nekukanda mafaera.
Maitiro 4: Chakagadzirwa njere (AI) uye Dhijitari Asset Management
Rimwe rebasa rinotora nguva kana uchishanda neDAM rine chekuita nekuwedzera metadata. Nekushandisa AI - uye nekuvagonesa kutora iri basa - nguva inoenderana nenguva inogona kutemerwa zvakanyanya. Kubva ikozvino, vashoma vashandisi veDAM vari kutora mukana weiyi tekinoroji.
Maererano FotoWare indasitiri yekutsvaga kubva 2020:
Chete 6% yevashandisi veDAM ndivo vaive vatodyara muAI. Nekudaro, 100% iri kuronga kuishandisa mune ramangwana, izvo zvinoita kuti vawedzere kukosha kweDAM yavo.
75% havana nguva yakatarwa yekuti izvi zvichaitika riini, zvichiratidza kuti vanogona kunge vakamirira tekinoroji kuti ienderere mberi kugadzirisa, kana kuti vangangodaro vasingazive mikana iriko pamusika.
Kubatanidzwa kune wechitatu-bato mutengesi uye AI-mupi, Imagega, yatove kuwanikwa muFotoWare, uye isu tinotenda kuti kubatanidzwa kwerudzi urwu kunongowedzera mukuzivikanwa. Kunyanya sezvo AI iri kuramba ichivandudza uye icharamba ichikwanisa kucherechedza zvimwe zvidzidzo nekufamba kwenguva, uye kuita izvi zvakadzama.
Kubva ikozvino, ivo vanogona kuziva uye kumaka mifananidzo ine iwo chaiwo mavara, asi vagadziri vachiri kushanda pakuvaita kuti vazive hunyanzvi, chinozove chinhu chakanakisa chimiro chemamiziyamu uye maberere. Vanogona zvakare kuona zviso zvakanyatsonaka panguva ino, asi kumwe kugadziridza kuchiri mumabasa, semuenzaniso panoshandiswa mafaceask, uye zvikamu zveuso chete zvinoonekwa.
Maitiro 5: Blockchain Technology uye Dhijitari Asset Management
Yedu yechishanu maitiro e2021 ndeye blockchain tekinoroji. Izvi hazvingori nekuda kwekukwira kwemabitcoins, uko kuri madikanwa kuitira kuteedzera budiriro nekutengeserana, asi nekuti isu tinotenda kuti tekinoroji inogona kuve yakanyanya kukurumbira mune dzimwe nzvimbo munguva pfupi iri kutevera, DAM iri imwe yadzo.
Nekushandisa blockchain kune DAM mapuratifomu, vashandisi vanogona kuwana kwakanyanya kudzora kwavo zvinhu, vachitsvaga shanduko dzese dzakaitwa kune faira. Padanho rakakura, izvi zvinogona - munguva - zvinoita kuti vanhu, semuenzaniso, vaone kana chifananidzo chakakanganiswa kana kana ruzivo rwayo rwakadzvanywa rwachinjwa.
Dhijitari Asset Management iri kuramba ichichinja, uye muFotoWare tinoita zvese zvatinogona kuti tifambirane nemaitiro. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezvedu uye nezvatinogona kupa, iwe unogona kutora musangano uncommittal nemumwe weavo nyanzvi:
Bhuka Musangano neFotoware DAM Nyanzvi
Tags: adobe rekugadzira goreaichakagadzirwa njereblockchainBlockchain teknolojiamafomu ekubvumadhamukusanganiswa kwedhamhudhamu softwaremadamu maitirodeloittedigitaalinen aseti manejimendidhijitari asset manejimendi manejimendiyedhijitari asset manejimendi softwaredigital asset manejimendi maitirofotowareGDPRmufananidzoMcKinseyMicrosoft Officepimukodzero dzekutongazvigadzirwa zvetekinorojiMaitiro